ပင်မဟင်းလျာများ / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
ဒီနေ့တောင်ပံတွေကိုအရှေ့တိုင်းနည်းနဲ့ဘယ်လိုချက်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအံ့သြစရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ ၎င်းသည်သူငယ်ချင်းအုပ်စုတစ်စုကိုဆက်ဆံရန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည် သရေစာအဖြစ်။
အရှေ့ကြက်သားတောင်ပံများသည်အလွန်အရသာရှိပြီးအရသာရှိလှသည်။ ၎င်းတို့သည်အမြှုပ်များသောက်ရန်အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်၍ အိမ်တွင်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေစဉ်အလွယ်တကူစားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအတောင်ပံများကိုပြင်ဆင်ရန်မှာအလွန်ရိုးရှင်းသည်၊ marinade သည်လူကြိုက်များသည်။ ဒါကြောင့်မှတ်ချက်များတွင်သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုကြိုးစားမျှဝေပါ။
ကြက်သားအတောင် - 500 Gram
soy ငံပြာရည် - 100 milliliter
ပျားရည် - 1 အနုပညာ။ ဇွန်း
ကြက်သွန်ဖြူ -2လေးညှင်းပွင့
ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိ - 1 /2အနုပညာ။ ဇွန်း
ငရုတ်သီး - အရသာစေရန်
နှမ်း - အရသာရန်
အရှေ့ Wings ချက်ပြုတ်နည်း
ပထမ ဦး ဆုံးငံပြာရည်ကိုပြင်ဆင်ပါ - စာနယ်ဇင်းများမှတစ်ဆင့်ကူးသွားသောပျားရည်၊
တောင်ပံများကိုနက်ရှိုင်းသောပန်းကန်လုံးထဲသို့ခေါက်ထားပါ။ ပြင်ဆင်ထားသည့်ငံပြာရည်ကိုသွန်းလောင်းပါ။ အနည်းဆုံး 1 နာရီအတွင်းရောနှောပြီးရေခဲသေတ္တာထဲပို့ပါ။
တောင်ပံများကိုကောင်းစွာရောမွှေ။ ကြိုတင်အပူပေးဒယ်အိုးတွင်ထားပါ။ အားလုံးနှစ်ဖက်အပေါ်ချက်ပြုတ်သည်အထိအတောင်ပံကြော်။ ကြော်စဉ်အတောင်ပံများကိုကျန်ရှိသောငံပြာရည်နှင့်ဆီလိမ်းနိုင်သည်။
ပြီးသောအတောင်ပံများကိုပန်းကန်ပေါ်တွင်တင်ပြီးနှမ်းစေ့များဖြန်းပါ။ Bon appetit!
next ကိုစံချိန်တင် →